आजबाट सुरु भयो ‘राज पञ्चक’: भुलेर पनि नगर्नुहोस् यस्ता कार्य, अनिष्ट हुनसक्छ ! – List Khabar
Home / रोचक / आजबाट सुरु भयो ‘राज पञ्चक’: भुलेर पनि नगर्नुहोस् यस्ता कार्य, अनिष्ट हुनसक्छ !
admin April 26, 2022 रोचक Leaveacomment 140 Views
आज अर्थात वैशाख १२ गतेबाट पञ्चक काल सुरु भएको छ। हिन्दू धर्म र ज्योतिषशास्त्रमा शुभ र अशुभ समयको गणनामा पञ्चकहरूलाई ठूलो महत्त्व दिइएको छ। सामान्यतया ५ दिनको पञ्चक अवधि शुभ मानिदैन। यस समयमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्न निषेध गरिएको छ। तर यो पञ्चक अवधि निकै विशेष रहेको छ।
राज पञ्चक -यो पञ्चक राज पञ्चक हो। सोमबारदेखि पञ्चक अवधि सुरु हुँदा त्यसलाई राजपञ्चक भनिन्छ। त्यसैगरी आइतबारदेखि शुरु हुने पञ्चकलाई रोगपञ्चक, मंगलबारबाट शुरु हुने पञ्चकलाई अग्निपञ्चक, शुक्रबारदेखि शुरु हुने पञ्चकलाई चोरपञ्चक र शनिबारदेखि शुरु हुने पञ्चलाई मृ-त्यु पञ्चक भनिन्छ। अर्कोतर्फ, बुधवार र बिहीबारदेखि सुरु हुने पञ्चक अधिकांश कार्यका लागि शुभ मानिन्छ। त्यसैगरी नयाँ कामको थालनीका लागि राजपञ्चक निकै शुभ मानिन्छ।
पञ्चकमा शनि गोचर -चन्द्रमाले घृणित, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद र रेवती नक्षत्रमा प्रवेश गर्दा पञ्चक हुन्छ। यस समयको पञ्चकमा कर्मदाता शनिको गोचर हुनेछ। साढे दुई वर्षपछि वैशाख १६ गते पञ्चकमा शनिले राशि परिवर्तन गर्दैछन्। यस्तो अवस्थामा यो पञ्चक अझ महत्त्वपूर्ण भएको छ। राजपञ्चक भएकाले यस अवधिमा सम्पति सम्बन्धि कार्य गर्नु निकै शुभ रहनेछ।
Previous काखीमा पसिना आएका कारण लज्जित हुनुहुन्छ ? यसरी पाउनुहोस् छुटकारा …
Next वालविकास सहजकर्ताको तलब आधारभूत शिक्षक सरह दिने यस्तो छ काङ्ग्रेसको प्रतिबद्धता